Raspberry Pi 400: sangana neiyo itsva retro-dhizaini "keyboard-PC" | Linux Vakapindwa muropa
Raspberry Pi 400: sangana neiyo nyowani «keyboard-PC»
Kubva kuRaspberry Pi Foundation kunouya imwe "toyi" yeavo vanoda chishandiso uye chakakwana michina. Mune ino kesi haisi nyore SBC senge Raspberry Pi, asi kit iyo inosanganisira zvinopfuura izvo. Chokwadi iyo Raspberry Pi 400 inokuyeuchidza nezve retro giya, senge Commodore, iyo Sinclair ZX Spectrum, nezvimwe. Uye iri chaizvo keyboard inovanza komputa yakazara pasi pemakiyi ayo ...
Iine Raspberry Pi 400 haufanire kunetsekana nekuenzanisa nyaya yako Raspberry Pi SBC bhodhi, kana kusanganisira yekunze keyboard kana mbeva, nekuti zvese izvo zvinosanganiswa mune ino kit iwe yaunogona kuona mumufananidzo. Nekureruka kwekuve nezvose zvakagadzirira kuzvibatanidza kune skrini uye kutanga nakidzwa nezvishamiso zveichi chirongwa.
Uye zvakare, iyi Raspberry Pi 400 inoenderana neiyo Pi 4. Uye kana iwe uchinetseka nezve iyo hunyanzvi hunhu Pedzisa, heino runyorwa:
Broadcom BCM2711 SoC QuadCore Cortex-A72 (ARMv8) 64-chidimbu 1.8Ghz. Simba reGPU rinotsigira 2x 4K kuratidza pa60FPS.
RAM ndangariro 4GB LPDDR3200-4.
Kubatana uye zviteshi: zvese zvinowanikwa kubva kune imwe yemaphrofayili ako
2 USB 3.0 madoko uye 1 USB 2.0 chiteshi
40-pini GPIO musoro unoenderana nePi4
2 microHDMI zviteshi
Yekhibhodi: 78/79 kiyi (dunhu rinotenderera) compact uye dhizaini dhizaini. Chitarisiko chayo chingave chiyeuchidzo checompact uye isina kurema Apple Magic Kiyi keyboard, asi inovanza komputa yakazara mukati.
USB 5v DC chinongedzo che kudya.
Kune makiti anogona kuwedzera kune ino base yeRaspberry Pi 400 mbeva yepamutemo, gadziriso yemagetsi yekupa simba, yepamutemo microSD ine Raspberry Pi OS yakaiswa-pamberi, microHDMI kune HDMI adapter tambo. Izvo zvichaita mutengo wayo enda kubva pa $ 70 kusvika ku $ 100 approx.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Raspberry Pi 400: sangana neiyo nyowani «keyboard-PC»